OR Dublin III Family Reunification | Refugee Info Bus
Biyya Haaratti erga godaane maatiin koo deebi’anii natti makamuu danda’uu?
Akka Wolii galtee Dublin III Maatiin deebi’anii walitti makamuu
Maatii irraa adda fagaatuun waan hedduu ulfaatuu fi onnee nama cabsuudha. Refugee Info Bus maatii keessan wojjiin deebitanii akkamiin akka wolitti dabalamtan irratti odeeffannoo kana isiniif qopheesseera.
Karaan maatii keessaniin deebitanii wolitti dabalamuuf ittiin iyyattan kana qofaan miti. Maatii woliin debi’anii wolitti dabalamuu,biyyootaan (family reunion by the state) fi Viisaa maatii (family visas) ilaalchisee fi odeeffannoo biroo kanneen maatiin wolitti dabaluu ilaalchisee maxxansa Refugee Info Bus ilaalaa.
Woraqaan odeeffannoo kun, namoota biyyoota Dubliin III keessa jiranii fi maatii biyyooyata dubliin III keessaa qabaniifidha.
Biyyoonni Dublin III Kanneen armaan gadiiti: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, the Netherlands, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland fi the United Kingdom.
Ati fi miseensonni maatiin kee akka woligaltee dubliinitiin wolitti dabalamuudhaaf iyyannoo galfachuuf karaa seera qabeessa ta’een biyya dubliin keessatti argamu qabdu (woraqaa baqataa qabaachuu,woraqaa koolugaltummaa, woraqaa kolugaltummaa namoomaa fi Lammummaa qabaachuu qabu)
Biyya dubliin III keessatti Maatiin deebitanii wolitti dabalamuudhaaf, erga iyyannoo koolugaltummaa, iyyannoo namoomaa ykn iyyannoo birootiif iyyattan Yeroo ji’a 3 hin caalle keessatti iyyachuu qabdu.
Akka woliigaltee Dubliin III yoo maatiin wolitti dabalamuuf iyyannoo galfattan kafaltii kamiyyuu isin hin baasisu. Haa ta’uu garuu, hiikkaa afaanii, woraqaalee barbaachisoo garagaraa erguudhaaf fi DNA gochuudhaaf kafaltii barabaachisuu mala.
Akka Dubliiin III Maatiidhaan deebitanii wolitti dabalamuudhaaf hanga ji’a 11 tura. Haa ta’uu garuu yeroo jedhame kanaa olis turuu ni danda’a.
Haala Dubliin III dhaan gara maatiitti dabalamuudhaaf;
1, Qaadhima ykn haadha manaa Kee (A spouse, civil-union partner or a common law spouse)
2, Daa’ima kee
3, Daa’ima umurii kee 18 gadi yoo taate, abbaa fi haadha kee, obboleessa, obboleettii, (Obboleetti fi obboleessa guddifachadhas ni dabalata)
4, Miseensota maatii kanneen biroo kan seera kana jalatti hin hammatamne ykn haala biroon mirkanaahu (Other family members under the discretionary clause)
1. Qaadhima ykn haadha manaa Kee (A spouse, civil-union partner or a common law spouse)
Heerumteerta ykn fuuteerta yoo ta’e, Qaadhima qabda yoo ta’e ykn jaalallee kee wojjiin woggaa lamaaf achii oliif wolitti fufiinsaan wojjiin jiraatteerta ta’ee fi isaan kun karaa seera qabeessa ta’een biyya Dubliin III keessa jiraatu yoo ta’e Iyyannoo maatii wolittii fiduudhaaf galfachuu dandeetta.
Woliin jireenyi Qaadima keetii ykn jaalallee yeroo dheeraaf wojjiin jiraattee, erga biyya kee irraa baate kan hundeeffame ta’uun irra hin jiraatu. Biyyoonni Dublin III kan wolitti dabalamuu maatii irratti Qaadima, haadha manaa (abbaa manaa) tokkoo ol hin eeyyaman. Atii fi Haati manaa/abbaan manaa kee maatiin wolitti dabalamuudhaaf aangawota biiya Dubliin III barreeffamaan hubachiisuu .
2. Ijoollee kee
Daa’ima biyya Dublin III keessaa kan qabdu yoo ta’e ykn ijoollee nama biroo kan seeraan biyyaare the Dublin III keessa jiraatan, maatiin deebi’anii akka wolitti dabalamaniif iyyannoo galchuu ni dandeettu.
Daa’imni ati iyyannoo maatii wolitti fiduu galchituuf umuriin isaa 18 ol ta’uu qaba.
Daa’imni ati iyyannoo maati wolitti fiduu galchituuf sun kan kophatti uf danda’e jiraatu ta’uu hin qabu(fakkeenyaaf, fuudhuu ykn heerumuu, ijoollee qabaachuu.) Atii fi miseensonni maatii angaawota biyya Dubliin III kan maatii wolitti fiduu irratti hojjatan barreeffaman yaadachiisuu qabdu.
3. Ijoollee Umurii 18 gadii (Unaccompanied minors)
Ijoollee umurii gaheessummaa hin geenne yoo taatee fi maatii keetin wolitti dabalamuuf :
● Maati malee kan kophaa deemaartu yoo ta’e ykn maatii irraa kan gargar baate yoo ta’e
● Umurii 18 gad yoo taate
Umuriin kee 18 gad ta’uu isaa mirkaneessuutu sirra jira, yoo si laalan nama umurii 18 olii kan fakkaattu yoo ta’ee fi umuriin kee sirrrii ta’uu isaa ragaalee mirkaneessan hin qabdu taanaan si amanuun ni rakkisa. Mootummaan iddoo qorannoon umurii keetii itti geggeeffamu si geessu danda’a.
Maatiidhaan deebitee wolitti dabalamuudhaaf, Abbaa ykn haadha, obboleettii fi obboleessa wojjiin iyyannoo galchuu dandeetta. Dabalataanis, Eessuma ga’eessa, adaadaa ykn akaakayyu dhaafis iyyachuu dandeetta garuu akka siif eeggumsa godhanii fi gargaarsa siif kennan mirkaneessuu qabu.
Irkataa jechuun nama ufii uf gargaaruu hin dandeenne fi gargaarsi namoota biraatiin godhamuufi qabuudha. Abbaa fi haati, ijoolleen, (umurii 18 gad ta’uun dirqamaa miti), obboleessi, obboleettiin kan siratti Irkatan ykn ati isaan irratti Irkattu ta’e, maatiin deebi’anii wolitti dabalamudhaaf iyyachuu dandeetta.
Wolitti dhufeenyi ykn hidhanni ati maatii woliin qabdu osoo biyya keet irraa hin bahin kan eegalame ta’utu irra jira.
Irkattoonni kanneen kanaa gadii keessaa tokko ta’uutu irra jira:
b. Kan daa’ima haaraa dhalate qabdu
d. Dhukkubbii cimaa
Kana jechuun dhibee yero dheeraaf turee fi kan fayyuu hin dandeenne ykn fayyuudhaaf yeroo dheeraa fudhatu (fakkeenyaaf, dhibee kaanserii).
e. Ykn Qaama hirdhuu
Miseensonni maatii akka irkataan gara maayiitti deebi’ee dabalamuuf gargaarsa gochuu fi qabu. Kana jechuun Mallaqa gahaa argachuudhaan biyya UK keessatti baasii barbaachisaa hunda kafaluudhaan danda’uu qabu.
Miseensota maatii kanneen woliigaltee ykn seera kana jalatti hin hammatamneef
Akka carraa ta’ee darbee darbee miseensonni maatii kanneen maatiidhaan deebi’anii wolitti makamuudhaaf seerichi hin eeyyamneef, karaa biroon yaaluu danda’u. Kunis carraan milkaa’uu hedduu xiqqaadha kan milkaayus yoo miseensonni maatii kan irkattoota ta’anii fi wolitti dabalamuudhaaf sababin isaanii iyyannoon isaani Irkattummaa namoomaa ta’eedha.